SUNGSAH: Korean To Myanmar Free Download
Korean To Myanmar Free Download
သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်ဝင်စားဆုံး ဘာသာစကားလို့ပြောလို့ရနိုင်တဲ့ ကိုးရီးယား မြန်မာ အဘိဓာန်လေးပါဗျာ။ဒီ Software လေးကို ကျွန်တော့ရဲ့လေးစားရတဲ့ ဆရာအစ်ကိုလို.လဲပြောလို့ရတဲ့ အစ်ကို ဆန်ထွန်း ဖန်တီးရေးသားထားတဲ့ Software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။သူငယ်ချင်းအားလုံး အသုံးတဲ့မယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။ဒီ Software လေးရဲ့ အားနည်းချက်ကို အရင်ပြောပြပါမယ်။သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကိုလဲ တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ပါ။ဒီ Software အားနည်းချက်တွေကတော့
1. Windows7Only ဖြစ်ပါတယ်။
2. နောက်တစ်ခုက ကိုရီးယားလိုအသံထွက် မြန်မာလိုမရေးထားပါဘူးဗျာ။(ဒီ ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအစ်ကို လို့ပြောထားတဲ့ ကိုဇော်လတ်ကြီး အလုပ်တွေ သိပ်မအားတာနဲ့ မထည့်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီ အတွက် ကျွန်တော်ကပဲ ကိုဇော်လတ်အစားတောင်းပန်ပါရစေဗျာ။)
3. နောက်တစ်ခုက Alpha ZawGyi Unicode အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဗျာ။
ကဲ သူငယ်ချင်းတွေ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာပုံနဲ.တကွ ပြပေးထားပါတယ် အောက်မှာ
ကဲ ဘယ်လိုလဲ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးသဘောကျသွားပြီလားဗျ။ဒါဆို ကျွန်တော်က ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲဗျာ။အောက်မှာ Download ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကဲ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ။အဆင်ပြေရင် သူငယ်ချင်းတို့ လက်တို့လိုက်ဦးနော်။ကျွန်တော် လဲသူငယ်ချင်းတို. ပျော်ရွှင်သလို ပျော်စေချင်တာပေါ့ဗျ ဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော် ဒီ Post လေးကို လွတ်လပ်စွာကူးယူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဗျာ။ဒါမဲ့ Post ပိုင်ရှင် ရဲ.နာမည်လေးကို ထည့်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေဗျာ။ဒီလို တောင်းဆိုရတာလဲ အွန်လိုင်း ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုအနေနဲ့လဲ လေးစားပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
Labels: Download dictionary
wanna July 17, 2012 at 9:19 PM
ဒီdictionary အတွက် software ရေးတဲ့သူကို ကျတော်မသိခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့် ကျတော်ဘလော့မှာ ဘယ်သူရေးတယ်ဆိုတာမထည့်ခဲ့မိတာပါ။လွန်ခဲ့ ခြောက်လလောက်ကထင်ပါတယ်။ကျတော်google မှာရှာရင်းဒီလိုပဲတွေ့ခဲ့တာပါ။software ရေးခဲ့တဲ့သူကို တကယ်လေးစားပါတယ်ဗျာ။